उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासका मुख्य न्यायधिसको विदाई::Online News Portal from State No. 4
उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासका मुख्य न्यायधिसको विदाई
बागलुङ, ११ असार – उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासका मुख्य न्यायाधिस शेषराज शिवाकोटीलाई मंगलवार बिदाई गरिएको छ । बुटवल स्थित उच्च अदालतमा सरुवा भएपछि उनलाई उच्च अदालत बागलुङले बिदाई गरेको हो । २० महिना बागलुङमा बस्दा उनले पु¥याएको न्यायिक योगदानलाई सहभागिले उच्च सम्मान गरेका थिए । न्याय परिषदले उनलाई सरुवा गरेको हो । कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता पद्मनाथ शर्मा र कृष्णप्रसाद शर्माले शिवाकोटीले गरेको न्याय सम्पादन कसैले प्रश्न उठाउने ठाउँ समेत नरहेको दावी गरे ।
शालिन व्यक्तित्वको रुपमा देखिएर पक्ष र आम नागरिकले समेत सम्मान गर्ने न्याय दिन सक्नुलाई सफलताको संज्ञा पनि दिए । कार्यक्रममा उक्त अदालत वार सिएसनका उपाध्यक्ष बद्रीप्रसाद शर्मा, पूर्व अध्यक्षहरु भूमिश्वर गौतम, राम शर्मा, राजु प्रसाद गौतम र काजी गाउँलेले पनि शिवाकोटीको योगदानको चर्चा गरे । साहित्यकारहरु प्रेम छोटा र काजी रोशन, सहन्यायाधिवक्ता डा. गोपिचन्द्र भट्टराई लगायतले शिवाकोटीले कर्मचारी समय देखि गरेका कामबाट आम नागरिक सन्तुष्ट भएको बताए । उच्च अदालतका न्यायाधिस हरिप्रसाद पौडेलको अध्यक्षता, अदालतका सहरजिष्ट्रार गोकर्णराज पन्तको संचालन र रजिष्ट्रार धुूबकुमार ढकालको स्वागतमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । शिवाकोटी बुटवल प्रस्थान गरेका छन् ।